Amisom oo kuwajahan Magaalada Baladweyne | Moment Union Somali Diaspora
Posted on February 11, 2012 by momentunion
Ayadoo Doowlada Somaliya waday qorshayaal dalka looga saraayo xarakada shabaab mujaahidiin aya xiligana shaacisay in ciidamada Amisom kuwajahanyihiin Gobolada dalka qaarkooda.
Wasiirka Arimaha gudaha Somalia Cabdi Samad Macalin Maxamuud ayaa shaaca kaqaaday in Dowlada wado qorshayaal Ciidamada Nabad ilaalinta ee Midwoga africa kugarayaan magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan tasoo bila kahor dowlada iyo Cidamada Itoobiyaanka xaqiijiyeen in gacantooda soo gashay.
Waxaa uu sheegay in ay Amisom u socdaali doonto Balad weyne iyagoo socod kumaraysa gobalada kasokeeya oo ay iyagana soo galinayan gacanta dowlada sida Sh/dhexe.
Mr Samad waxaa uu sheegay in muhiimadu ay tahay in ciidanka Amisom ay qabtaan meeshii ay ka baxaan Al shabab ayna gacan ka geystaan in deegaankaas loo sameeyo maamul hoos taga dowlada .
Ugu danbeyntii Wasiirka arimaha gudaha Somalia oo la weydiyaay waqtiga ay Amisom aadeyso Hiiraan iyo cida hada maamusha magaalada Balad weyne ayaa midaas ka gaabsaday.